> Resource > iPod > Music Stream in iPod ka PC
Dareen ka careysan in la helo heesaha oo dhan jirka ah ee aad iPod lagu bedelay kuwa cusub? Haddii ay haa tahay, waxaad u timid inaad meel sax ah. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu soo bandhigo iPod qalab xirfad music kala iibsiga magacaabay Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows). Iyada oo ay taasi iPod qalab music kala iibsiga, waxaad leedahay fursad ay ku sii qulquli music in iPod ka PC oo aan laga badinin wax song jir. Waxaa loogu badalo karaa music in MP3, daynin aad ku raaxaysato songs la qaabab leheyn.
Ahaanshaha user Mac ah, waxaad u tagi kartaa si version Mac of qalab - Wondershare TunesGo (Mac) . Waxa ay ku siinaysaa fursad ay ku sii qulquli music aad iPod ka Mac si fudud aad.
Download this iPod qalab music kala iibsiga si ay isugu dayaan in ay hoorto music iPod.
Fiiro gaar ah: The version Windows - Wondershare TunesGo waa la jaan qaada daydo iPod, oo ay ku jiraan iPod taabashada, isku shaandheeyn lagu iPod iyo nano iPod. Fadlan hubi oo dhan oo ay taageerayaan daydo iPod iyo macruufka ah .
Sida loo sii qulquli music in iPod ka PC
Labada qeybood oo sidoo kale qabtaan. Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'isku day version Windows ah. Ku rakib version saxda ah ee aad PC. Waxaa Launch si ay u muujiyaan suuqa kala xiriir.
Tallaabada 1. Isku aad iPod in PC la cable USB ah
Si aad u bilaabaan oo leh, xiriiriyaan iPod in PC kasta oo aad iPod ee USB cable. Marka aad iPod xiran yahay, tan iPod qalab music kala iibsiga waxaa lagu ogaan doonaa ka dibna u soo bandhigaan uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Stream iPod music ka PC
In galeeysid bidix, guji "Media". Guji "Music" on bar ugu sareeya inay soo qaadaan suuqa kala music ah. By gujinaya "Add", waxaad ka heli doontaa suuqa kala file browser. Browse aad PC in la helo heesaha oo aad rabto in aad sii qulquli. Iyaga qulquli in aad iPod.
Marka ay tani iPod qalab music kala iibsiga ogaadaa in heesaha oo aan lagu ciyaari karo aad iPod, waxaa idin xusuusin doonaa oo loogu badalo in ay iPod songs saaxiibtinimo.
Haddii aad ku abuuray qaar ka mid ah playlists maktabadda Lugood ama aad kombuutarka, si toos ah aad iyaga aad u qulquli karaa in aad iPod.
Kaalay dib ugu galeeysid bidix, guji "playlist" si aad u hesho suuqa kala playlist on xaq ah. Riix saddexagalka "Add" hoos. Markaas, waxaad leedahay laba fursadood: "Add Playlists ka Computer" iyo "Add Lugood Playlists".
By gujinaya "Add playlists ka Computer", waxaad ka heli suuqa kala file browser. Dul meesha aad badbaadin playlists iyo iyaga qulquli.
Fiiro gaar ah: version Mac of qalab this ma taageeri soo degida playlists Lugood in aad iPod. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad playlists in aad ku darto iPod, laakiin ma muujiyaan playlist sida version Windows ma.
Haddii aad rabto in aad sii qulquli playlists Lugood in aad iPod, guji "Add Lugood Playlists". In la jiido hoos menu pop-up ah, hubi oo kaliya playlists aad doonayso. Guji "OK". Markaas, taas iPod qalab music kala iibsiga uu bilaabo inuu sii qulquli music iyo music info, sida rating, qashanka iyo xisaab play.
Isku day TunesGo inay sii qulquli music on iPod!
Sida loo Daawo Movies on iPod taabashada